एउटा बाजीले बढ्यो ६ फुट कपाल, कस्तो थियो बाजी ? | Rajmarga
एउटा बाजीले बढ्यो ६ फुट कपाल, कस्तो थियो बाजी ?
हरेक महिलाको सपना हुन्छ कि लामो र सुन्दर कपाल होस् । महिलाको सुन्दरताको मापन पनि उसको अनुहार र कपालबाटै गरिन्छ ।जसको जति लामो कपाल छ, उसलाई त्यति नै सुन्दर मानिन्छ । यसका लागि महिलाहरु पनि अनेक उपाय अपनाउने गर्दछन् ।
Previous post: यस्ता छन् लसुन सिरानीमुनी राखेर सुत्दा हुने फाइदा
Next post: पानी समस्या समाधान गर्न सक्ने नै नेताका रुपमा उदय हुने